Dorgommiin madaallii leenjii gudatootaa xumurame – Fana Broadcasting Corporate
Dorgommiin madaallii leenjii gudatootaa xumurame
Finfinnee, Hagayya 3,2011 (FBC) -Dorgommiin madaallii leenjii guddattootaa magaalaa Shaashamanneetti torban lamaaf gaggeeffamaa ture guyyaa kaleessaa bakka gaggeessitoonni fi keessummoonni argamanitti xumurameera.
Sagantaa cufiinsa kana irratti hasawa kan tasisan komishinarri komishinii ispoortii Oromiyaa obbo Naasir Huseen hasawa taasisaniin,”Guddina ispoortii bu’uura guddaa fi ummataawaa ta’ee haala itti fufiinsa qabuun ykn dhaabbataan guddisuuf hojiin guddattoota irratti hojjetamu ga’ee bakka bu’uu hin dandeenye qaba.
Komishiniin Ispoortii Oromiyaa hojii irra oolmaa karoora misooma ispoortii karaa saayinsaawaa ta’een hojii irra olchuuf hojii bal’aa hojjetaa jira jedhan. Haluma kanaan hojii leenjii guddatootaa xiyyeeffannoo guddaan akka hojjetamu taasisuun jijjiirama guddaan akka dhufu taasisee jira.
Keessattuu baayyina pirojektoota akka naannootti jiru ol guddisuun, Godinaalee fi B/Magaalaa hundi ispoorteessitoota 2231 akka irratti hirmaatan taasisuun torban lamaaf gosoota ispoortii adda addaatin taasifamaa turee jira.
Lakkoofsii dorgomtootaa Godinaa fi Bulchiinsa magaalaa kan duraani gaggeefamaa ture olitti gudatee jira. Akkasumas, akaadaamii biyyoolessaa baayyinaan guddatootni naannoo Oromiyaa akka seenan taasisaa jira.
Dhimma guddatootaaf xiyyeeffannoo kennamuu akka naannootti sadarkaa olaanaa fi ammayyaa’aa ta’eetti guddisuuf akaadamii Amboo fi Boqojii rakkoo gaggeessummaa duraan ture hiikuun ogeessota ga’umsaa fi dandeettii guddaa qabaniin bakka akka bu’u taasifamee jira. Karaa biraan akaadamii Magaala sulultaa Birrii miiliyoona 800 ijaarsisuu irratti kan argamu yoo ta’uu dhibbeetaa 60 oli irraan ga’ee jira.
Yeroo xumuramuu guddattoota naannoo keenyaaf carraa hedduu kan banuu dha. Dabalataan Pirojekteetaaf kallattiin deeggarsi adda addaa maallaqa guddaan deeggaruun hojjetaa jira. Kunis egeree ispoortii biyya keenyaaf komishiniin ispoortii xiyyeeffannoo addaa kennuun kan hojjetu ta’uu isaa qabatamaan hojii agarsiisu akka ta’e ibsaniiru.
Obbo Naasir Dorgomtoonni qabxii gaarii fiduun milkaa’anif baga gammadan jechuun warra hin milkoofnneen hanqina keessan irraa barachuun fuula duraafa cimtanii hojjechuun akka milkaa’an dhaamaniiru.
Gareewwan naannoo bakka bu’uun dorgomuuf filataman injifannoo caalmaaf of qopheessuun olaantummaa dorgommii biyyaalessaa irratti qabu mirkaneessuun akka xumuran imaanaan isinitti kenname guddaa ta’uu isaa hubachuun, Injifannoo kanaaf of qopheessuu akka qaban dhamaniru.
Sirni cuufiinsaa kunis gareewan ispoortii adda addaatin moo’aniif badhaasa waancaafi badhaasa keennuun xumurameera.
Qabxii guutuu argachuuf taphanna-Leenjisaa Abrahaam.
FIFA’n leenjisaa duraanii Arsenaal aangoo olaanaatti muude
Sambataa fi Dilbata darbe dorgommii atleetiksii gaggeeffameen atleetoonni Ityoophiyaa…